त्यहाँ सयौंदेखि हजारौं बोटनेटहरू छन् जुन हरेक दिन कम्प्युटर उपकरणहरूको विशाल संख्यामा संक्रमित हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँका अनलाइन गतिविधिहरूको कारणले बोटनेटलाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँसँग कम्तिमा बोटनेट्सले कसरी काम गर्ने र कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे विचार हुनुपर्दछ। जब यो बोट्नेसको कुरा आउँदछ, आकार निश्चित रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यो किनभने बुटनेट नेटवर्कहरू ठूला छन्, अपरेटि systems प्रणाली र कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूमा बढी क्षति हुनेछ। तपाईले बेर्नु हुँदैन किनभने botnets डील गर्न सजिलो छैन।
यहाँ आर्टेम अब्गारियन, Semalt बाट एक अग्रणी विज्ञले major प्रमुख botnets र कसरी तिनीहरूलाई रोक्नको बारेमा कुरा गरेका छन्।
१. पुश्डो / कटवाइल
यो बोटनेटलाई लोडर पनि भनिन्छ। यो सजीलै डाउनलोड गरीन्छ र कम्प्युटर उपकरणमा स्थापना हुन्छ। व्यापार मोडेल यो हो कि पुश्डो ग्राहकहरुका लागि अनुकूलित छ र यसले एक उपकरणमा धेरै स्पाइडर र बट्सहरू फैलाउने लक्ष्य राख्छ। बोटनेट हजारौं स्थापना द्वारा चार्ज गरिएको छ, र यसको गति उपकरण बाट उपकरणमा फरक हुन्छ। यसले तपाईंको प्रणालीमा अन्य प्रकारको मालवेयर र भाइरसहरू डाउनलोड गर्दछ, कटवेल सहित। कटवाल एक ईमेल स्पाम हो र वेबमेल वेब आधारित स्प्याम ईन्जिन हो। ती दुबै वर्ष बितिसकेका छन्, र पुश्दो दुबै कटवेल र वेबमेलको प्रयोग इन्टरनेटमा स्पाम र मालवेयरको प्रतिलिपिहरू फैलाउनको लागि गर्दछ।
Pushdo जस्तै, Bredolab प्रचलित छ र बिभिन्न उप-कोटीहरूमा बिग्रिएको छ। यो स्प्याम र मालवेयर अनलाइन फैलाउनमा शामिल छ। Bredolab स्केयरवेयर र स्पाइवेयर डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्न केन्द्रित छ। ब्यापार मोडेलले एकै समयमा धेरै उपकरणहरू संक्रमित गर्नुपर्दछ, आशा छ कि पीडितहरूले सम्बद्ध लिंकबाट उत्पादनहरू खरीद गर्नेछन्।
यो बोटनेट क्राइमवेयर किट्सको रूपमा व्यापक रूपमा बेचिन्छ, यसको मतलब यो बट्स र सम्झौता गरिएको कम्प्युटर उपकरणहरूको विशाल संग्रह हो। त्यहाँ जियस को लागी बिभिन्न खोजहरु छन्, र यो बोटनेटको उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी चोर्नु हो। यो मुख्यतया इन्टरनेट मा बैंक प्रमाण पत्र र PayPal आईडी चोरी मा संलग्न छ।
कटवेल जस्तै मात्र, वेलेडाक अनुकूलित टेम्प्लेटहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई मालवेयर र बट्स डाउनलोड गर्नमा मद्दत गर्दछ। यसको सुरूवात भएदेखि, यस बोटले पियर टु पियर नेटवर्कमा कार्य गरिरहेको छ र डाउन गर्न गाह्रो छ। यो सजिलै मालिसियस प्रोग्रामहरू र प्रोक्सी HTTP लाई तपाइँको कम्प्युटर वा वेबसाइटमा लोड गर्न सक्दछ।
यस बोटनेटलाई कुनै परिचय चाहिदैन। यो कहिल्यै प्रमुख रूपमा सक्रिय छैन तर समयको साथ महत्वपूर्ण क्षतिहरूको कारण छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई धम्काउँदैन तर उनीहरूको संवेदनशील जानकारी चुपचाप चोरी गर्दछ।
कसरी बोटनेट रोक्न?
बोटनेट रोक्नको सबैभन्दा सजिलो र उत्तम तरिका भनेको एन्टि-मालवेयर वा एन्टिभाइरस कार्यक्रमहरूको स्थापना हो। तिनीहरूले तपाइँको व्यक्तिगत कम्प्युटर तल लिनु अघि, तपाइँ तिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्दछ र अपराधीहरूका लागि एक गुलाम हुनुहुन्न। शुरुआतीहरूको लागि, हामी सुझाव दिन्छौं कि उनीहरू क्यास खाली गर्नुहोस् दिनमा एक पटक र नियमित आधारमा एप्लिकेसन र विन्डोज अपडेटहरू लागू गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो प्रोग्रामहरू र सफ्टवेयर विशेषमा सुरक्षा प्याचहरू अप टु डेट राख्नुपर्दछ, र प्रत्येक पटक तपाईंको कम्प्युटर खोल्दा स्क्यान गर्नुहोस्।